Ukuvala okuthambileyo kwi-3 okanye ibhola ethambileyo xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineengenelo ezingekapheshelwa ngokwendlela, umgangatho, inkangeleko entle, njl njl. kwaye uqhubeke ngokuqhubekayo. Inkcazo yokuvala okuthambileyo ukuvala i-3 okanye ibhola ethwele ibhola inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
I-Csala Wardrobe yeKhaya lokuvalela okuKhawulezileyo kwi-Clawer Ukuvalwa kwezixhobo ze-boods kunye nexabiso le-CRORDECH kunye nexabiso le-Hinge.
Ukuvala okuthambileyo kwi-3
Abanye babathengi bethu abaye basebenzisa le mveliso iminyaka eliqela bavumile ukuba kuncediswa oko kunceda ukusindisa kakhulu kwiindleko zawo zezixhobo.
1.Yintoni ubuncinci be-oda ye-oda ye-oda yokuthenga?
2.Angayinkampani yenkampani okanye umvelisi?
2.Excellent emva kwenkonzo yokuthengisa: Sinikezela simahla kwaye sigqwesile emva kwenkonzo ukuba ithengisiwe yonke iimpahla, ukuba kukho ukuzithoba kuthi, siza kuyicombulula le ngxaki emva kokunikezela ubungqina bokuqala.
4.Umdla wokuthenjwa: Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, iYurophu neAsia. Okwangoku sinenethiwekhi yokuhambisa kumazwe angaphezu kwama-20, iYurophu neAsia. Nceda usazise ukuba sinokukwenza ntoni. Wamkelekile ukuba ngumsasazi wethu omtsha kwimakethi yakho, ujonge phambili kwintsebenziswano ende emide!
1.0 * 1.0 * 1.2mm 1.2 * 1.2 * 1.2mmm 1.2 * 1.2 * 1.5mm
I-hinclim emhlophe, umbala we-zinc, mnyama
1. Yenziwe ngentsimbi eqengqelekayo yentsimbi eqengqelekayo, i-erfmeisite ye-craft ye-craft, i-suble-subler upost enganyangekiyo ekutsaleni kwaye ingasebenzi ngokulula
2. Ukufaka isicelo seZinto zokuba Izinto Ezithambileyo zeSilayidi seDrawer, zontathu zenza ukuba i-track up back kunye neziqendu zangaphakathi zomelele.
3. Ibhola eqinileyo yentsimbi yentsimbi, uyilo oluthe cwaka oluguqukayo, ukuncitshiswa kwengxolo okuthe cwaka, ukuze ubomi kunye neofisi ikhululeke kakhulu.
I-4mthy yomgangatho ofanelekileyo, inokutsalwa ngokulula ngaphezulu kwama-50 000, kwaye inokuxhasa izinto ezinobunzima obungaphantsi kwe-25 kg kunye nenxalenye yesilayidi sobukhulu be-Squawer kwaye sinokuhlawula ngaphezulu kwe-25kg.
5. Ukwenza i-buffer yenza ukuba kubethelele xa kutyhala xa kutsala idrowa, kuya kwenziwa yi-buffer, kuya kwenziwa yi-buffer kufuphi ngokusondeleyo i-cawer ngexesha lokutyhala idrowa ngasemva.